Toy ny ankizivavy ianao Mampiaraka. Claudel Modely - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Toy ny ankizivavy ianao Mampiaraka. Claudel Modely
Tsara, dia toa be dia be toy ny anao
Ny fahitana anao ao am-po, ary na dia ao amin'ny taovam-pisefoana tsy fahombiazanaAvy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, izy dia tsy akaiky anao. Aza mandany fotoana, miteny. Ary ireo soso-kevitra dia tokony hanampy anao hianatra ny mba hanomezana fahafaham-po ny zazavavy.
Avy eo, raha ny resaka dia feno ny fotoana mba hanohy.
Tsy mora ny daty, fa ny fivoriana, tanàna iray fisotroana kafe na ny Valan-javaboary.
Raha toa ka ny fivoriana dia atao, ary ianao dia afaka mahita fa izy tia azy, ary na dia bebe kokoa - dia misy dikany mba hikarakara ny namana.
Tolo-kevitra toy izany dia tokony tsy hiadian-kevitra any minitra, ary, toy ny fitsipika, fa tsy amin'ny andro voalohany. Raha mahatsapa ianao fa efa tonga ny fotoana, rehefa misy angamba tsara ny valin ny fanontaniana lehibe.
Ny andian-teny mety tsara ny toe-draharaha.
Toy ny fitsipika, ireto fanontaniana manaraka ireto dia nanontany hoe: Tianao ve ny tovovavy? Na rehefa unwrap izany, te hanasa anareo handray izany miaraka aminao. Fa angamba ianao an-tsaina fa ity no dikan-tany am-boalohany.
Raha diso ianao, raha toa ianao ka tsy nisy fahadisoana na tafintohina zazavavy.
Manomboka miresaka momba ny zavatra tsy misy dikany
Angamba izany dia mampiseho fa izany aloha loatra, na fa izy efa manana ny olon-tiany. Foana ny hamantatra ny antony nahatonga ny fandavana. Aza kivy raha toa ianao tena tia ny zazavavy - miezaka mba handresy, fa tsy hanosika. Hiditra voninkazo, fiarahabana isa, ary angamba ny fotoana manaraka dia ny hahazo tsara ny valin io fanontaniana io. Farany ary manan-danja indrindra soso-kevitra dia ho foana. Farany, raha toa ka afaka manao izany, sy ny anjara toerana eo amin'ny fiarahamonina izay mety ho marina sy misokatra amin'ny fomba miteny. Raha ny ankizivavy dia afaka tsy manaiky ny hoe iza aho, aza misalasala mba hisarika ny saina ny vehivavy iray hafa.
mahafinaritra finday sary Fiarahana ho an'ny fifandraisana matotra te-hihaona amin'ny zazavavy izay mba nahalala velona ny lahatsary amin'ny chat mampiaraka toerana lahatsary fampidirana ny fifandraisana ny tovovavy ho an'ny Fiarahana lahatsary sary tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana ny fiarahana video firaisana ara-nofo amin'ny chat Mampiaraka